V.A. / BEST COLLECTION OF VOLUME 5, 1000 Myanmar Traditional Songs Collection | EL SUR RECORDS
V.A. / BEST COLLECTION OF VOLUME 5, 1000 Myanmar Traditional Songs Collection
投稿日： 2020年2月26日	 MMN, MYANMAR CD ¥2450 (2019) 再入荷 !!
2013年よりヤンゴン国立芸術文化大学の教授にして音楽家の DIRAMORE　(ディラモー）氏のプロデュースで進められて来たという、ミャンマー伝統音楽1000曲の記録 / 保存コレクション、その第5弾ＣＤがこちらです。CDリリースは第９集まで予定されているとのこと。ほかダウンロードのみとなるそうです。このプロジェクトには日本から、井口 寛さんがエンジニアとして参加しています。その井口さんにお願いして買付けいただきました。
Gita Yadana 1000 Myanmar Traditional Songs Collection ( Vol – 5)!မြန်မာတို့အတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်လှတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာတေးသီချင်းပေါင်း(၁၀၀၀)စုစည်းမှုမြန်မာ့ ဂီတဆိုတာကလည်းမြန်မာတွေအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ တေးသွားသံစဉ်လေးတွေကေ ခေတ်အဆက်ဆက်ရှင်သန်နေပြီး နှစ်သက်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအတွက် မြန်မာ့ဂီတ တေးသီချင်း အပုဒ် ၁၀၀၀ စုစည်းမှု ဆိုပြီး Gita Yadana Vol 1,2,3,4 ထိထွက်ရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ ယခုအခါ "Gita Yadana Vol – 5" ကို15 Jan 2019 တွင် MMN မှ ဖြန့်ချီမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဂီတကိုကြိုက်နှစ်သူများအတွက်သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်နော်…….ဂီတရတနာ Volume –5(AUDIO CD)(1000 Myanmar Traditional Songs Collection, Collected by Diramore)Youtube Link – https://www.youtube.com/watch?v=Xke7mNC7cb4#MMN #mMusicNet #DiRaMore #ဓီရာမိုရ်
カテゴリー：Asia-India, NEW CD タグ：Myanmar, Traditional
V.A. / MUTUALLY EXCLUSIVE MUSIC 2
V.A. / BEST COLLECTION OF VOLUME 3, 1000 Myanmar Traditional Songs Collection
U HLAING WIN MAUNG / PLEASING MELODY 2
MYOMA AMATEUR MUSIC TROUPE / SONGS No.1〜4